I-ac gear motor iyathengiswa, i-3 phase ac gear motor, ac motor
i-ac gear motor, 3 isigaba ac gear motor ngentengo yokuthengisa
Uhlobo lwama-motor egiya le-AC
I-AC gear motor enamandla okuhamba ngejubane, i-3 isigaba se-ac gear motor, i-ac kulia angle gear, i-giya motor ene-brake, i-AC gear motor low rpm, i-AC Gear motors Parallel Shaft, Inverter Duty AC Gear motors, 110V Geared Motor, ac gear motor 6 rpm, ac gear motor 100 rpm, ac gear motor 60 rpm, AC gear motor 30rpm, Custom AC Gear Motors njll.
Iyini imoto yamagiya ye-AC?
Imoto yamagiya e-AC iyimoto ehlanganiswe no-gearbox noma idrayivu yokuhambisa ukwenza ama-torque afakwe ngokuphelele emsebenzini oqhubekayo, izicelo zenhloso ejwayelekile. . Ama-AC gear motors angakhelwa ukuphatha imithwalo ehlukahlukene ngejubane elingaguquguquki elenzelwe izinhlelo ezidinga amazinga aphezulu we-torque yokukhipha. Kunezinhlobo ezimbili zama-AC gear motors ezigaba ezintathu nesigaba esisodwa. Isigaba ezintathu esenzelwe izimboni eziningi sisebenzisa futhi Esinye esokusetshenziswa kwasekhaya ikakhulu.
Ungayikhetha Kanjani Imoto Yegiya Le-AC?
Kusuka ku-spped, ungakhetha i-AC gear motor rpm low, i-AC gear motor 12rpm, noma i-AC gear motor 30rpm njll. Ngendlela yesicelo, ungathola imoto yegiya nge-brake, ac gear motor nge-speed control noma i-Inverter Duty AC Gearmotor . Ukusuka ohlotsheni lwamagiya, kukhona i-helcial, izibungu, i-bevel njll. Uma indawo yakho incane kakhulu ukusebenzisa ama-AC gear motors, bese uthola iCompact AC Geared Motor ekwazi nokwenziwa ngendlela oyifisayo.
Hlobo luni lwezinsizakalo amaSogears angalunikeza?
AmaSogears wenziwa ngobungcweti bezimoto ze-ac kusuka eChina futhi ithimba lethu lobunjiniyela lenzelwe inqwaba ye-AC GEAR MOTOR & GEAR HEAD eningi lamakhasimende angaphandle. ngamasu ethu okuthuthuka Ama-motors ethu e-AC afinyelela ku-820,000 lb-in kanye ne-speed ratios efinyelela ku-13,540: 1 ehlangabezana nezidingo eziningi zemboni. Okubaluleke kakhulu ukuthi hhayi kuphela ikhwalithi enhle, kepha inani eliphansi le-AC gear motor.
Isethulo Sethu Ikhathalogi ye-PDF Ye-AC Gear Motors
I-AC gear motor iyathengiswa China
Izithombe ze-AC gear motor
Siyakwamukela ukuxhumana nathi ukuze wazi intengo yethu ye-AC gear motor.
I-AC gear motor ephansi rpm
ac gear motor ngokulawulwa kwejubane
Xhumana nentengo yemoto ye-AC gear
I-AC gear gear 30 rpm
I-3 isigaba ac gear motor
I-AC gear gear 100 rpm
Kungani Khetha Sogears?
Singumkhiqizi odumile we-AC gear motors futhi Sinikeza zonke izinhlobo zamagiya ama-giya kwizicelo ezahlukahlukene zezimboni ezinesici esihle kakhulu.
Bheka Amotor Wethu Kagesi
Ukuthengiswa kwemboni yethu eqondile yemoto kagesi ngekhwalithi enhle, i-10 hp noma i-15 HP motor ngokwesibonelo.
Bona yethu 3 isigaba ac gear motor
Ukusetshenziswa kwe-ac motor nokusebenzisa kwayo, i-gear motor ene-brake
I-AC gear motor 60 rpm, i-AC gear motor ephansi ngo-rpm, Ukusesha okuhlobene nesivinini sokunciphisa isivinini
Intengo yemoto ye-AC gear
IHelical Gearbox Yangaphakathi | F uchungechunge oluhlanganayo we-helical gear motor kasier
I-Yantai, Shandong, China